IIMPENDULO | Imbuyekezo Archibald Tech Co., Ltd.
I-Q1: Ngaba ndifuna i-solder xa ndifumana izibane? Ngaba iza nomyalelo?
A: Awudingi kuthengiswa xa ufumana izibane, kwiphakheji iya kuba nephepha lokufundisa, zonke izibane zethu ziza nendibano yasimahla.
Q2: Kuthekani ixesha phambili?
A: uku-odola phantsi kweeseti ezingama-50, singathumela ngeentsuku ezisi-7 emva kokuba kwenziwe intlawulo.ngoku-odola ngaphezulu kweeseti ezili-100, singathumela ngeentsuku ezili-12 emva kokuba kwenziwe intlawulo.
Q3: uzithumela njani iimpahla kwaye kuthatha ixesha elingakanani ukufika?
A: Sihlala sithumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx okanye i-TNT. Kuhlala kuthatha iintsuku eziyi-3 ukuya kwezi-5 ukufika ngenqanawe emnyango ukuya kuthatha iintsuku ezili-15.
I-Q4: Ngaba ndingayiprinta i-logo yam?
A: Ewe, sinokuprinta i-logo yakho kwibhodi ye-PCB kunye ne-heatsink ngaphandle kwentlawulo ngaphandle kwe-MOQ.
Q5.Luluphi uhlobo lwezityalo onokulukhulisa ngezibane zethu zokuKhula kwe-LED?
Zonke iintlobo zesucculents: izityalo zonyango, ibhola yecactus, umsila we-burros kunye nezinye.Faka isicelo kwizithole zezityalo zangaphakathi kwigadi yegreenhouse ekhaya naseofisini.Oku kukhanya kukukhanya okupheleleyo, kokubini veg kunye neentyatyambo.
Q6. Ngaba umzi-mveliso okanye urhwebo inkampani?
RE: Singumzi-mveliso wokukhanyisa i-LED onamava iminyaka emininzi e-SHENZHEN, China.
Q7.Ngaba uyayamkela i-OEM okanye i-ODM okanye uyilo lwethu olukhethekileyo?
RE: Ewe, i-OEM, i-ODM kunye neemveliso ezenziwe ngokwezifiso zingamkelwa.
Q8. Upakisha njani iimpahla?
RE: Zipakishwe ibhokisi kumazwe standard.
Q9.Uzihambisa njani iimpahla?
RE: Ukuhanjiswa okucacileyo, imithwalo yomoya okanye ukuthunyelwa kolwandle nokuba yeyiphi na eya kuqwalaselwa kumthamo weempahla, ubunzima kunye nokuhanjiswa kwemithwalo
Umbuzo10. Yintoni indawo yokugubungela?
I-Z2 / Z3 640watt ikhava ye-20sqft, i-800watt ikhava ye-25sqft, ukuba kwinqanaba le-VEG, inokugubungela ubuncinci i-6 * 6ft
Umbuzo Ukuphakama kangakanani ekufuneka ukuxhoma izibane zakho?
Siphakamisa iisentimitha ezi-6 + kude nekhenophi yeentyatyambo. Kwi veg okanye kwi-clone, ii-intshi ezingama-30 + ziya kulunga okanye uzame ukunciphisa izibane kwindawo efanelekileyo endaweni yokulungisa umgama. Apha ibonisa amanqanaba e-ppfd ahlukeneyo ukusuka kubude obahlukeneyo.
Umbuzo Yintoni na imveliso isibane sakho? Zingaphi izityalo ezinokuthi zigubungele isibane?
Ngokwamanye amaxhala ethu abathengi, iya kuba yi-1.6-2.2 gram / watt, exhomekeke kubume bendalo obukhulayo, nobunzima obahlukeneyo. Nazi ezinye iimpendulo zesivuno. Kwinqanaba le-veg, izityalo eziyi-8-10, kunye neentyatyambo ezi-5-6 zezityalo. Kuxhomekeke kubungakanani besityalo.
Umbuzo13. Kutheni ixabiso lakho liphezulu kunezinye?
1. INalite kuphela kweQhinga lokuSebenza leQhinga kunye nenkampani yakwaSamsung, pls khangela ngobubele isatifikethi kumfanekiso olandelayo. Sinomthengisi wenqila
2. Umdlalo wethu uphela kukuvuma isiqinisekiso se-ETL, i-cETL.
3.Iyethu ine-patent reflector, inokunyusa i-10% ppfd.
Sinefuthe lokuthelekisa uphawu olukhulu, (Fluence, Gavita)
Kodwa ixabiso lethu likhuphisana ngakumbi kwiimarike
Umbuzo14. Isetyenziswa ikakhulu kwixesha lokudubula kweentyatyambo, ingaba yi-3000K?
1. Izibane zethu zizele ngokupheleleyo ngama-3500k + 660nm, alingana no-3000k. Kukwanele ukukhanya okubomvu ukwenza uncedo olukhulu kwinqanaba leentyatyambo. Lo mboniso upheleleyo ugqibelele ekukhuleni kwe veg kunye neentyatyambo. Akucetyiswa ukuba uchithe imali kwizinto ezinje ezenziwe ngokwezifiso.
2. MOQ yi-50pcs ukuba ufuna ngokwenene ukubonwa okucwangcisiweyo.
Umbuzo Uluhlu oluhlengahlengiswayo?
Ukukhanya kwethu akululanga.
Nantsi indawo yokukhanya, 3500K + 660nm, isibuko esipheleleyo esifanelekileyo ukukhula komjikelo opheleleyo, akukho sidingo sokuhlengahlengisa isibuko.
Ukuba ufuna ukubonwa okubonakalayo, kuya kufuneka ubuncinci amaqela ama-2 umbala weetshipsi. Xa ujika kummahluko wokwahluka, ezinye iichips zombala azisebenzi ngamandla aneleyo, ngeli xesha i-PPFD ayiphezulu ngokwaneleyo.
Akukho mgangatho womlimi ukuze afumane umboniso olungileyo xa uqhuba isibonisi esinokubakho. Ukuba ukubonwa kokugqibela akulunganga oko kuya kwenzakalisa izityalo zakho.
Umbuzo 16. Ngaba ungenza imveliso? I-logo yesiqhelo kunye nebhokisi yesiqhelo
Singumzi-mveliso esinoku-OEM kumthengi wethu, akukho ngxaki, kodwa sine-MOQ, kunye ne-1 ye-usd / ii-pcs zeefizi zelogo.